ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: မြင်အောင်ကြည့်ရင် မြင်ပါတယ် ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, October 29, 2007
Good idea and good presentation too...
ဘုရင်ကြီး ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဆိုတာမျိုး
မှောင်မဲ မိုက်ကန်းနေတာတော့ သိပါတယ်၊
မြင်အောင်ကြည့်ပေမယ့်လဲ မညာတမ်းပြောရရင် ဘာမှမြင်ရဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာဘာ လဲဆိုတာ ရင်ဘတ်ထဲက ခံစားသိနေတယ်။
ဘာမှ မမြင်တာကို မြင်တယ် :D
ခံစား နားလည်သလို ရှိတာက လွဲလို့ အနက်ရောင် ကိုသာ မြင်ရပါကြောင်း
ခင်ဗျားပြောချင်တာတွေကို ခံစားကြည့်ရင်း ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်သတိရမိတယ်။ အနုပညာကို ဖန်တီးသူနဲ့ ခွာပြီး ခံစားကြည့်ကြဖို့ဆိုတာလေးကို။
ရွာတစ်ရွာကအလှူကိုဧည့်သည်တစ်ယောက်လာပါတယ်။ အလှူရှင်ကလာပြီးဧည့်ခံတာပေါ့။ စားရင်းသောက်ရင်း ဧည့်သည်က စကားစမြည်ပြောရင်း အလှူမှာဖျော်ဖြေနေတဲ့ ဆိုင်းဝိုင်းနဲ့ သီချင်းဆိုနေတဲ့သူအကြောင်းပြောကြရင်း ဧည့်သည်က မကောင်းဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ အလှူ့ရှင်က အခုသီချင်းဆိုနေတာက သူ့သမီးပါတဲ့။ ဧည့်သည်လည်း တော်တော်အားနားသွားတယ်။ ဒါနဲ့ စကားစ ဖာထေးတဲ့အနေနဲ့ အင်း ဆိုတာလေးကတော့ ဒီလောက်မဆီုးရှာပါဘူး ဆိုင်းဝိုင်းမကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ထပ်ပြောပါတယ်။ အလှူရှင်ကလည်း ရိုးသားစွာနဲ့ အဲဒါသူ့ညီနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများတီးတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှာတယ်။ ဧည်သည်က ပိုပြီးအားနာသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဆိုတဲ့သူရော ဆိုင်းဝိုင်းပါ ဒီလောက်ကြိး အဆိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ အဓိက တရားခံတွေ့ပြီ.... သီချင်းရေးတဲ့သူပဲ။ တော်တော်ချာတာကိုးဗျလို့ ပြောမိပါတယ်။ အဲဒီအခါကြတော့ အလှူ့ရှင်ခမျာ မျက်စိမျက်နှာပျက်နဲ့ ... ကျွန်တော် ကြိုးစားပမ်းစားစပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးပါခင်ဗျာတဲ့ .....ကဲကောင်းကြသေးရဲ့လား။
ကိုနေဘုန်းလတ် ကြိုးစားပမ်းစားရေးထားတဲ့ မဲမဲကြီးပါခင်ဗျား ..... :D
အမည်းရောင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်က စာသားတွေကို မြင်အောင်ကြည့်သွားပါတယ်။ တချို့အနုပညာပစ္စည်းတွေဆို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ကို မရပါဘူး…။ ခံစားကြည့်မှ သိနိုင်တာမျိုးတွေပါ…။ လူနဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာကို ခွဲမြင်ဖို့ကတော့ တကယ့်ကို အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်…။
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ။ ပို့စ်ကိုလည်း မြင်ပါ့။ အနုပညာကိုလည်း မြင်တတ်သလို ကြည့်သွားပါတယ်ဗျာ :)
စစချင်းတော့ နာကပိန်းတယ်ကွ ဘာမှမြင်ဘူးဆိုပြီး ပြောရင်လဲ နာ့ကို ညက်ချိမှုံတယ်ပြောဦးမယ်။
အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို ခံစားတဲ့နေရာမှာ ဒါဘယ်သူဖန်တီးတာလဲဆိုတာကို ဖယ်ထားပြီး ခံစားမှ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝမယ်ဆိုတဲ့ နင့် အမြင်ကို ထောက်ခံတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီပို့စ်ကိုမြင်တာနဲ့ နင့်ကို တွေးပြီး ဒါတော့ ငါတို့ကို စဉ်းစားခိုင်းပြန်ပြီ အတွေးတွေ ပေးတွေးဦးမှာပဲလို့ ခံစားလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာတင် အဖြေသိအောင်ပဲ ကြိုးစားမိတော့ (အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျိုး) နင်ပေးချင်တဲ့ အနုပညာကို ငါ့အပေါ်သက်ရောက်မှုက ကွာခြားသွားပီကွ။
အိုကေ သူငယ်ချင်း လူနဲ့ သူရဲ့ အနုပညာကို ခွဲမြင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ နင်ပြောပြတဲ့ အတိုင်း “အနုပညာဆိုတာဘာလဲ ” မြင်နိုင်အောင် မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ ဆက်ကြိုးစားဦးမယ်ကွာ။ Thanks for your valuable post. Cheers!
နဘလရေ မြွေမြွေချင်းမို့ ခြေမြင်တယ်ပြောပြော ရင်ဘတ်ချင်းတူလို့ ခံစားကြတယ်ပြောပြော
ကိုယ်ကတော့ စကားလုံးတွေကို select လုပ်ပြီး ချက်ချင်းသိလိုက်ပါရဲ့ ။
ခံစားချက်ဆိုတာ လိမ်ညာမရဘူး။ အမှန်တရားဆိုတာ ဖုံးထားလို့မရဘူး။ အနုပညာနဲ့ မျိုးစုံ ခံစားသရုပ်ဖော်ကြတာ ဘယ်လိုတားနိုင်မှာလဲ။
Dude ... nice idea ... :)
I've been read your blog for long time over6mths, but then, now I can't stop myself not to leave comment for your this post. Bravo !!!!! Walk on !!!!!!!!!! I admire you for 'Eduaction Village' post as well.
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ - ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မရိုးရအောင် ရေးနေရုံသာမက Creation ဆန်ဆန်လေးတွေပါ တွဲပြထားတာ လှပါတယ်။ Blogger တွေ ရေးအားနည်းနေတုန်း ပို့စ်ကောင်းလေးဖတ်လိုက်ရပြန်ပြီပေါ့။း) ကျေးဇူး။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးမှာ အမည်မသိတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်မန့်လေးကို ကျွန်တော်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ် …။ အဲဒီလိုဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ အဲဒီ့သူကို ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါတယ် …။ သူရေးထားတဲ့ ကွန်မန့်က ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာပစ္စည်းရဲ့အနှစ်သာရကို ပျက်စီးစေသလိုဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အခုလိုဖျက်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် …။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို လာရောက်ဖတ်ရှုသူတွေမြင်နိုင်ဖို့ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြတာဖြစ်ပါတယ် …။ ကျွန်တော် ပဟေဠိဖွက်နေတာမဟုတ်သလို၊ ဥာဏ်စမ်းနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး …။ ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို လာကြည့်ကြသူတွေက သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို အပြည့်အ၀အသုံးချပြီး သူတို့စိတ်တိုင်းကျ ခံစားသွား ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်…။ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို ကြည့်ရှုခံစားသူတွေအနေနဲ့ ဖန်တီးသူက ဘာတွေပြောချင်တာလဲဆိုတာကို အတိအကျသိနိုင်ဖို့က အဓိကမကျဘူးလို့ ယူဆပါတယ် …။ ဒီပို့စ်လေးမှာ ဆိုရင်လဲ အမဲရောင် မျက်နှာပြင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး … တစ်ခုခုခံစားမိသွားတယ်ဆိုလဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ကျွန်တော်ရေးထားတာတွေကို မြင်ပြီး တစ်ခုခုခံစားမိသွားတယ်ဆိုရင်လဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမှ ထိပါးဖို့ မကြိုးစားသလို … ကျွန်တော့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလဲ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ထိပါးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ် …။ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အသေအချာသိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရင်း … လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ခံစား နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် …။
အနီရောင်သွေးတွေကို သွေးလှူဘဏ်ကို ကောင်းကင်ကြီးအောက်က ကတ္တရာလမ်းမကြီးပေါ်က နေရောက်အောင်သွားပြီးလှူပေးသွားပါ၏။ ကိုနဘလ ရဲ.cerativity ကိုလေးစားပါတယ်။
အဲဒီအမှောင်တွေ လင်းဖို့အတွက် ငါကြိုးစားနေတယ် သူငယ်ချင်း။
ကျွန်တောက တော့သူများနဲ့မတူတဲ့ အမြင်နဲ့မြင်မိပါတယ်။ တခါတလေ မှာမြင်ချင်းမှာ အတူတူပေမဲ့ စိတ်အတွင်းခံစားချက်နဲ့ မြင်ရတဲ့အမြင်ကစက္ခုအာရုံ အမြင်ထက်ပိုပြီး ကြည်လင်ပြီး ဘယ်တော့မှမေ့မပျောက်နိုင်အောင်စွဲထင်စေပါတယ်။ အရောင်တွေရဲ့သဘောတရားတွေက လူတွေ့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။
ှုAt first I saw anything, later i saw by my mind and felt one feeling but I can't mention that.Thanks for so many good blogs.